INokia 6.2 iza kufika ngokusesikweni kule ntwasahlobo | I-Androidsis
AbakwaNokia basishiye nenxalenye yeefowuni zabo ezintsha ze-2019 kwi-MWC. Kwimeko yokubonisa yenkampani sele sele sibonile ezinye, Uluhlu lwalo lokufaka kunye naphakathi. Nangona ifemu ineemodeli ezininzi esele zilungile, ekulindeleke ukuba zifike kwintengiso kwezi veki. Enye yeemodeli esinokuyilindela kungekudala yiNokia 6.2, oza kungena ezi-6.1 waziswa kunyaka ophelileyo.
Le Nokia 6.2 yifowuni entsha yoluhlu oluphakathi lwegama. Ukuphehlelelwa kwayo akuyi kuthatha thuba lide ukuba ibe semthethweni, kuba kulindeleke ukuba iboniswe ngokusemthethweni kule ntwasahlobo. Ke ngumcimbi weeveki ezimbalwa ngaphambi kokuba le modeli yomsayino yenziwe ngokusemthethweni.
Kwinto esinokuyilindela kule modeli ngokweenkcukacha, asinayo idatha eninzi. Nangona kubonakala ngathi inkampani iya kuqhubeka kunye nomgca esiwubonayo kude kube ngaphakathi kolu luhlu. Kuba olu sapho lweNokia 6 yeyona eyona ndawo ithengiswa kakhulu yinkampani Ukuza kuthi ga ngoku.
Ngesi sizathu, kuyakuthi kugcinwe ixabiso elifana nelo i-6.1 yayinayo kwimarike. Ke sinokulindela ukuba le Nokia 6.2 isungule nge Ixabiso elimalunga nama-279 ee-euro kwintengiso. Asazi ukuba iya kuba lixabiso elifanayo okanye ukuba ukunyuka kuya kuba kuncinci kakhulu. Ngayiphi na imeko, sinokufumana umbono ngoku.
Le Nokia 6.2 bekulindeleke ukuba iboniswe kwi-MWC e-Barcelona. Nangona oku akwenzekanga ekugqibeleni, kuya kufuneka silinde iiveki ezimbalwa ukuba le modeli ifike. Eyona nto inokwenzeka, kwezi veki siza kuba nokuvuza malunga nale modeli.
Ngaphandle kwamathandabuzo, iya kuba yimodeli ebalulekileyo kuluhlu oluphakathi lwenkampani. Olu luhlu yeyona nto ithengisa kakhulu kwinkampani. Ke kuyanceda ukuthengisa ukonyuka kuyo. Mhlawumbi kwiintsuku ezimbalwa siza kuba nokuninzi idatha ebambekayo ekufikeni kweNokia 6.2 kwintengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » INokia 6.2 iya kuziswa kule ntwasahlobo